Isistimu yesibhengezo esikhulu
Izicelo:Imicimbi yangaphandle, Imibukiso, Inxanxathela yezitolo, Izimakethe, Imibukiso Yezimoto njll, noma kuphi lapho udinga khona ukuze udonse ukunaka kwabantu.
Manje iningiIsigxobo esikhulu, Isigxobo sefulegi esikhulu nomaWindancer amafulegingaphezu kuka-5m ukuphakama kunesigxobo se-aluminium esinethangi lamanzi, inkulu ukuthuthwa / isibhengezo esisodwa esingunxande esitholakalayo/ ifulegi livamise ukugoqa isigxobo / Ipali elinyazwe umoya onamandla.Ngakho-ke siklame le sistimu entsha ye-flagstand yesidingo sefulegi lesigxobo esikhulu.
Eyethuifulege elikhulu ukuma kwangaphandle, i-pole in carbon composite material , okuyisisindo esilula, esivumelana nezimo futhi imelana nomoya onamandla.Ugqinsi lwezigxobo lungaphezu kukasayizi wesigxobo ojwayelekile, ngakho-ke lungasetshenziswa ngisho nomoya onzima njengesibhengezo esikhulu sangaphandle.
Isistimu yezigxobo efanayo ingenza izinhlobo zefulegi ezi-3 ezihlukene, okuhlanganisa ifulegi le-blade, ifulegi le-deco tear kanye nefulegi elingunxande (kuphela ngokungeza isigxobo sengalo).Ngokusekelwe esigxotsheni esingu-5m, ungangeza ingxenye eyengeziwe ukuze wenze usayizi ophakeme.Ilungele kakhulu abasebenzisi bokugcina abanesidingo esihlukile somumo wefulegi, futhi kube lula kubathengisi ukuthi balawule isitoko.
I-flagpole yethu ephathekayo igcwele isikhwama se-oxford esingapakisha isibhengezo nezinye izisekelo ngaphakathi.Ubukhulu bokupakisha bungaphansi kuka-1.2m obuvumelana nephalethi yase-Europe futhi yonga imali enkulu eyengeziwe yokuthutha okusheshayo.
Yimaongakhetha basezihlanganisa i-Ground spike, i-Cross base, i-Car Mount Stand kanye nesisekelo esikhulu esigoqekayo ukuhlangabezana cishe nazo zonke izicelo zesigxobo esikhulu.Isisekelo samanziingangezwa esiphambanweni ukuze kube nokuzinza okungcono
Isisekelo sethu esikhulu esigoqekayo sakhululwa ngo-2020 futhi siphakanyiswa kakhulu ngamaphoyinti angu-3 abalulekile okuthengisa:
1.Ngokuthwala ukuvumela isigxobo ukuzungeza emoyeni, ifulegi ngeke ligoqe isigxobo
2.I-Engineered Alu frame yenza isiqiniseko sokuthi usayizi omncane wokupakisha
3.Ifanele izinhlelo zokusebenza eziningi, I-Peg iyasebenza /isikhwama sesihlabathi esengeziwe nomaisisindo samanzietholakalayo
(2) Isigxobo esiyinhlanganisela yekhabhoni sinikeza izinga eliphezulu lokuqina, amandla kanye nokuguquguquka kune-Aluminium pole.Ukuphakama kwe-Pole kufika ku-7m
(3) Ukufakwa kwe-plug-in kulula ukukuhlanganisa futhi kuvikeleke endaweni
(4) Uhlu olubanzi lwezinketho eziyisisekelo ezitholakalayo ukuze zivumelane nezinhlelo zokusebenza ezahlukene
(5) Zonke isisekelo ezinesistimu yokuthwala ezungezayo, gwema ifulegi ukuthi lingahlangani.
(6)Isethi ngayinye iza nesikhwama sokuthwala, Esilula futhi siyaphatheka
Ikhodi Yento Ukuma kophaphe Isimo se-Teardrop Umumo kanxande GW ngesethi ngayinye Ubude bokupakisha
Ubude bokubonisa Usayizi wefulegi Ubude bokubonisa Usayizi wefulegi Ubude bokubonisa Usayizi wefulegi
I-GTB-s 5.8m 5.5m 4.4m 0.9kg 1.2m
I-GTB-M 6.8m 6.5m 5.4m 1.2kg 1.2m
I-GTB-L 7.8m 7.5m 6.4m 1.5kg 1.2m
Okwedlule: I-Budget Teardrop/Feather Flag
Olandelayo: 4 ku-1 Uhlelo